Codsiga mashiinka goynta laser 3D robot-ka ee warshadaha baabuurta
Adeegsiga goynta laser robotka jilicsan ee warshadaha gawaarida ayaa si isa soo taraysa u kordhay, kaas oo si aan kala go ’lahayn ugu xidhnaa horumarinta teknolojiyadda laser iyo hagaajinta teknoolojiyadda kontoroolka ee robotka saxda ah. Xaalada cusub, baahida loo qabo isticmaaleyaasha baabuurta waa ...Read more »
OREE tube dhaqaale Mashiinka goynta laser AMA-TL online!
waqti Post: Sep-30-2019
OREE Laser ayaa T-Taxanaha tube dhaqaale Mashiinka goynta laser ah AMA-TL soo saarka cusub. X The, Y iyo stroke dhidibka Z waa sii korodhay. Iyadoo xafidaada hawlaha dhaqanka ee OR-T, shirkadda siisaa macaamiisha kala duwan ee xal technology goynta biibiile. Qiimaha ahaaneed ah ...Read more »
OREE laser AMA-PT muuqaalka hagaajinta cusub
waqti Post: Sep-23-2019
Laser mashiinka goynta, saxan iyo tube dual-Ujeedada Mashiinka goynta laser, tube saxan si buuxda u soo lifaaqay laser mashiinka goynta, mashiinka goynta laser casriyeeyay cusub. OREE P laser sarrifka taxane tube madal iyo tube dual-Ujeedada Mashiinka goynta laser fiber (AMA-PT) muuqaalka hagaajinta cusub. ...Read more »
laser mashiinka alxanka gacanta lagu OREE AMA-HW
waqti Post: Sep-04-2019
OREE Laser si rasmi ah la sii daayay laser mashiinka alxanka gacanta lagu soo AMA-HW. Mashiinka alxanka gacanta lagu bedelaa habka alxanka dhaqanka, iyadoo la isticmaalayo-xoojinta sare dogob laser sida il kulayl waayo, alxanka, iyo bedelida Jidka hore go'an indhaha la qoriga gacanta lagu alxanka. Waxay leedahay th ...Read more »
macaamiisha Ruush si guul ah ku qabtay shir
waqti Post: Aug-29-2019
AMA-FM3015 shirka ayaa si guul leh ku qabtay si guul ah in Russia. The qolof sheet bir adag oo kaamil ah cut maxkamad workpiece in soo jiidatay dadkii ugu dhagaystayaasha. iibka ah ee OREE Mashiinka goynta laser waa go'aan ugu saxda ah. Intaa waxaa dheer ee OR-FM3015 hagaajin doonaa processi ku ...Read more »
waqti Post: Jun-11-2018
Waxaan weydiiso dareenka of macaamiisheena raadinaya mashiinada goynta laser, sida OREE laser ka qeyb gali doona qalabka mashiinka caalamiga Qingdao ku Bandhiga in August. Fair Tani International of Tools Machine iyo Technologies for Production - show ugu muhiimsan ee caalamiga ah ee producti ku ...Read more »
2017 Seminar of Ji'nan Dibadda Trade Enterprises
waqti Post: Dec-14-2017
In 5-tii April 2017, "2017 Seminar of Ji'nan shirkadaha ganacsiga Dibadda" waxay ahayd qabtay in OYADE Group. Waxaa jira in ka badan 15 shirkadda dhigtaan seminar this ujeedadoodu tahay si ay u wadaagaan waayo-aragnimo ganacsiga shisheeye iyo fursadaha. Inta ka qaybgalayaashu waa agaasimaha CEO ama Sales ee shirkadda ku qoran in manufactur ...Read more »
dib u June, 2017, Oree Laser badan beergooyska iyo Thanksgiving. Thanks for macaamiisha kasta, mahad noo halleeya, Thanks for our kasta Oree Laser. Maxaa yeelay, adiga, Oree Laser leeyihiin goosashada aad u badan. Thanks for qayb kasta Oree Laser, Oree Laser Man ayaa kaalin is-siinta & d ...Read more »
Maareeyaha Dhexe Dhismaha Tababarka ee OYADE Group
Si loo hirgeliyo dhismaha tababare dhexe, hirgeliyaan "Guuleysan dhexe" istiraatiijiyad, 12aad, June, our comapny yeedhi muxaadaro ku marti Ururka Horumarinta Shiinaha Resource Human Lu Hualong sameeyey bandhig ah oo ku saabsan xafiiska. All foomka nanager dhexe OYADE Group iyo Ergay ka dhigtaan ku xidhan ...Read more »
Faa'iidooyinka Jarida Laser ka Laser Oree
goynta laser ayaa faa'iidada badan marka loo eego noocyada goynta dhaqameed kale tan iyo markii uu la soo bandhigay. On steel khafiif ah, ahama, iyo aluminium habka laser goynta waa heer sare ah oo sax ah, waxay bixisaa tayada cut u fiican, ayaa kerf aad u yar, (width of cut ama jeexdin) ayaa yar ...Read more »
FAQ ee Hab-Jarida Laser ka Laser Oree
Waxaad xalka caadi ah oo ku saabsan mishiinka goynta laser iyo habka goynta laser ka heli kartaa. Working Mabda'a Laser goynta waa technology in uu isticmaalaa laser ah si ay u dhinto qalabka, iyo sida caadiga ah loo isticmaalo codsiyada soo saarka warshadaha, laakiin waxaa sidoo kale laga bilaabo in la isticmaalo by dugsiyada, ganacsiyada yaryar ...Read more »